तिनाउँ कचलमा निर्माण भएको हेल्थपोष्ट भवन उद्घाटन – E Kutumba
तिनाउँ कचलमा निर्माण भएको हेल्थपोष्ट भवन उद्घाटन
By ईकुटुम्ब Last updated Nov 23, 2021 0
पाल्पा – तिनाउँ गाउँपालिका वडा न. १ कचलमा निर्माण सम्पन्न भएको हेल्थपोष्ट भवनको हालै उद्घाटन गरिएको छ । उक्त भवनको उद्घाटन तिनाउँगाउपालिका अध्यक्ष ओम बहादुर घर्ति मगरले सोमबार एक समारोहका बिच गर्नुभएको थियो ।
उद्घाटन कार्यक्रममा गाउँपालिका उपाध्यक्ष दमन्ती थापा , प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत सुन्दर प्रसाद श्रेष्ठ, गाउँपालिका प्रबक्ता राजेश श्रेष्ठ, स्वास्थ्य शाखा इन्चार्ज कृष्ण कार्की, शहरी विकास तथा भवन निमार्ण विभाग संघीय आयोजना कार्यान्वयन ईकाई भैरहवाका ईन्जिनियर ध्रुव पौडेल लगाएतले शुभकामना मन्तव्य राख्नु भएको थियो ।
भवन निर्माण विभागका ईन्जिनियर ध्रव पौडेलले कचल हेल्थपोष्टको व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष तथा वडा अध्यक्ष रोम बहादुर लम्तरीलाई मायाको चिनो र प्रमाणपत्र सहित भवन हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो । वडा अध्यक्ष रोम बहादुर लम्तरीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा हेल्थपोष्ट इन्चार्ज नरप्रसाद थापाले स्वागत मन्तव्यबाट स्वागत गर्नुभएको हो।
कार्यक्रमको सन्चालन युवा वर्ष माविका प्र.अ. प्रेम श्रेष्ठले गर्नुभएको थियो। संघिय सरकायरको एक करोड २५ लाख लागतमा निर्माण भएको भवनमा १२ कोठा सहित व्यवस्थीत भवन निमार्ण भएको छ ।
तिनाउँ गाउपालिका भित्र ४ वटा मात्र स्वास्थ्य चौकी रहेकोमा थप १० वटा स्वास्थ्य ईकाइ थप गरी १४ वटा स्वास्थ्य संस्था, एक वटा आयुरर्वेदिक अस्पतालको शाखा, लायन्स लाकौल आखाँ अस्पताल सँग साझेदारी गरी आखाँ अस्पतालको शाखा स्थापना, स्वास्थ्य चौकी र स्वास्थ्य ईकाइको भवनहरु पनि निर्माण गरेको गाउपालिका अध्यक्ष ओम बहादुर घर्ती मगरले बताउनु भएको थियो ।
सेयर बजार ओरालो लाग्दै , एकै दिन ३२ अंकले घट्यो
जनगणनाको काम अन्तिम चरणमा